कबुलेको दान नदिनेहरुले निकाले मुख छोप्न काइते बिज्ञप्ती
डिसेम्बर ५, २०१२
एन आर एन बेल्जियमको नामबाट बिज्ञप्ती सार्वजनिक गरिएको छ (बिज्ञप्ती अन्तिममा हेर्नुहोला) । बिज्ञप्ती ‘फाटेको जालैले छेकेको, छेकेपनि छर्लङ्गै देखेको’ भने जस्तै छ । बिचरा एन आर एन बेल्जियमसित सायद लेटरहेड पनि छैन । त्यसैले सादा कागजमा छापिन्छ...
फ्रान्सबाट त वर्षिने भो नी एनआरएनको संयुक्त लगानीमा !
नोभेम्बर २२, २०१२
एनआरएनले जल बिद्दुतमा लगानी गर्ने भन्ने हल्लाखल्ला निकै चल्यो । धेरै नेपाली यस विषयमा कुहिरोको कागमा फसेका । लगानी गर्नु राम्रो त हो, तर करिब डेढ दशक पछि मात्रै मुनाफा दिने क्षेत्रमै लगानी गर्न किन एनआरएनको जोडजुलुम...
एन आर एन जलबिद्दुत लगानी : पछुताउनु पहिलेनै सोच्नुस् है ?
अगस्ट १९, २०१२
गैह्र आवाशिय नेपाली संघले नेपालको जल बिद्दुतमा लगानी गर्ने भन्दै यतिखेर आव्हान गरिरहेको छ । देश देशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुका प्रतिनिधी सहयोगी र चासो दिनेहरुले आफु बसेको देशमा रहेका नेपालीहरुलाई लगानीकालागि जोड गरिरहेका छन् । धेरैले भनेका...
राजनितिक दलका पकडमा विश्वभरिका एन आर एन
अगस्ट ८, २०१२
● थानेश्वर सापकोटा / बेलायत सन् २००३ मा उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा गठन भएको एनआरएनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई संगठित गर्ने अभियान सुरु गर्दा युरोप, अमेरिका र जापानमा नेपालका राजनैतिक दलहरुको उपस्थिति शून्यको हाराहारीमा थियो । कताकती काँग्रेस र...
“एन आर एनको कार्यशैली पञ्चायतकालिन”
अप्रिल २९, २०१२
राजाले शासन हत्याएका बेला एन आरएनले बिज्ञप्ती जारी गरेरै प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गरेको थियो । अहिलेपनि संविधानसुझावका लागि बिज्ञहरुको टोलीमा एन आर एन अध्यक्ष जिवा लामिछाने छानिएका छन् । तर जति काम गरेपनि एन आर एनकै अध्यक्षहरुले...
कसरि बनाउने एन आर एनलाई आफ्नो र राम्रो संस्था ?
मार्च २९, २०१२
● देवमान हिराचन / प्रमुख संरक्षक, गैरआवासीय नेपाली संघ विदेशमा बसेका नेपालीले प्राप्त गरेको ज्ञान, शिप, सम्पती र अनुभवलाई नेपालको विकास र पुर्ननिर्माणमा लगाउनुका साथै विदेशमा बसेका नेपालीको पिरमर्का र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघको...
न्रित्य प्रतियोगितामा एन आर एन नेपाल प्रवर्धन दलको ब्यापक चासो
एन आर एनको एउटा समिति छ, नेपाल प्रवर्धन गर्ने बिदेशमा । त्यसले यूरोपमा हुन लागेको नेपाली एकल न्रित्य प्रतियोगिताको ब्यापक चासो राखेर विश्वभरि फैलिएका नेपाली समक्ष यो कार्यक्रम सफल पार्न र सहभागि हुन झक्झकाएको छ । सोम...
एन आर एन बेल्जियमका पदाधिकारी हो कता गए तिम्रा आश्वासन ?
नोभेम्बर २६, २०११
• सन्तोष न्यौपाने / बेल्जियम ‘यहाँ जसले भर्खरै आएर आफ्नो बसाइलाई ब्यवस्थित गर्न प्रयत्न गरिरहनुभएको छ, यहाँको बसाइलाई स्थाइ गराउन विभिन्न प्रोसेस र प्रक्रिया छन । त्यो प्रक्रियालाई ब्यवस्थित गरेर उहाँहरुको बसाइलाई स्थाइ बनाउने कुरामा मैले र...